Mampong-Ashanti, Ashanti, Gold Coast (now Ghana)
Lieutenant General Akwasi Amankwaa Afrifa (24 Oforisuo1936 – 26 Ayɛwohummumɔ 1979) yɛ kane manpanyin a odii asraafoɔ aban anim wɔ Ghana, na odii ade firi Oforisuo da ɛtɔ so , afe apem ahankrɔn aduosia nkrɔn (1969) kosii Ɔsanaa da a ɛtɔ so nsɔn, afe apem ahankrɔn aduosɔn (1970). Ɔtoaa so sɛ kuanii ne amanyɔnii. Ɔtoo aba yii no sɛ marahyɛbadwani wɔ afe apem aha-nkron ne aduoson nkron mu (1979) nanso ɔyii no firii hɔ a wantumi ani akonwa no. Ɔne afoforɔ bi te sɛ , General Kutu Acheampong ne General Fred Akuffo, ɛne nkrɔfoɔ num (Utuka, Felli, Boakye, Robert Kotei and Amedume), wɔ Ayɛwohummumɔ 1979 . Na Okatakyie nso yɛ edin a nipa pii nso de frɛ no, na Akwasi Amankwaa Afrifa nso ka ho bi ɛne abakomahene of Krobo wɔ Asante-Mampong wɔ Asante man mu.
Owiee ne ntoasoɔ sukuu Adisadel College no, ɔde ne ho kɔdom Ghana asraafoɔ kuo no wɔ afe apem aha-nkron ne aduonum nson mu (1957) nna ɔde no kɔɔ "Regular Officer's Special Training sukuu". ɛfiri hɔ no, ɔkɔɔ 'Mons Officer Cadet sukuu, Aldershot, wɔ England wɔ afe apem aha-nkron ne aduonum nnwɔtwe mu (1958). Ɔsan nso wiee 'officer training wɔ Royal Military Academy, Sandhurst, England. Wɔ afe apem aha-nkron aduosia baako (1961) mu no, na ɔwɔ sukuu of Infantry, Hythe, United Kingdom.
Ɛwɔ afe apem aha-nkron ne aduosia (1960) mu no, ɔyɛɛ Afrifa 'second lieutenant' wɔ Ghana Asraafoɔ kuo no mu. Ɛfiri afe apem aha-nkron ne aduosia mmienu (1962) de kɔ si afe apem aha-nkron ne aduosia nnan (1964) mu no, na ɔyɛ 'general staff officer' wɔ kuo no mu. Ɔsan nso kɔɔ 'Defence College', wɔ Teshie Accra. Na Afrifa ka officers no a wɔn som wɔ Ghana contingent of the United Nations Operation wɔ Congo no ho.Afrifa kɔɔ n'anim bɛyɛɛ Major. Na ɔsan nso yɛ 'Staff officer' a na ɔhwɛ army training ne operations wɔ afe apem aha-nkron ne aduosia num (1965) mu. Na ɔte Kumasi, wɔ 'second infantry Brigade' kɛseɛm.
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Akwasi_Afrifa&oldid=110896"
Nsesae ba kratafa yi so da 30 Oforisuo 2022, mmere 21:43.